आन्तरिक पर्यटन बजारमा छाउँदै खुशीयाली::Hamro Koshi Awaj / awaz
आन्तरिक पर्यटन बजारमा छाउँदै खुशीयाली
२०७८ असोज २३
हरेक वर्षको २७ सेप्टेम्बरका दिन विश्वभरि ‘विश्व पर्यटन दिवस’ मनाइने गरिन्छ । यसवर्ष पनि गएको २७ डिसेम्बरका दिन औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा विश्वभरि ४२ औं ‘विश्व पर्यटन दिवस’ मनाइयो भने, यसवर्षको नारा ‘टुरिज्म फर इन्क्ल्युसिभ ग्रोथ’ अर्थात् नेपालीमा ‘समावेशी वृद्धिको लागि पर्यटन’ रहेको थियो । सन१९७९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले हरेक २७ सेप्टेम्बरका दिन ‘विश्व पर्यटन दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको थियो । सोअनुसार सन १९८० देखि विश्वभरिका देशहरुले हरेक वर्षको २७ सेप्टेम्बरलाई विश्व पर्यटन दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।
त्यसो त विश्वमा पर्यटन व्यवसाय संस्थागत ढंगले कहिले र कसले गरे ? भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ । यसरी पर्यटन व्यवसाय संस्थागत सुरु गर्ने काम सर्व प्रथम बेलायतका नागरिक थोमस कुकले गरेको मानिन्छ । उनले सन् १८४१ मा पहिलो पटक बेलायतका पाँचसय जना पर्यटकलाई रेलमार्पmत आफ्नै देश (बेलाय) को ‘लेइस्टर, लेईस्चर’ देखि ‘लोउफब्रो, लोउफबोरो’सम्म भ्रमण गराएका थिए । यसरी कुकले संगठित रुपमा भ्रमण व्यवसाय अर्थात् ‘ट्राभल बिजनेस’को सुरुवात गरेका थिए भने घुम्न निक्लने मानिसहरुको पर्यटकीय वा विदा मनाउनेबाहेक अरु खास कुनै उद्देश्य थिएन ।
त्यसैले विश्वले कुकको भ्रमण टोलीलाई पर्यटकको दर्जा वा भनौं मान्यता दिईएको देखिन्छ । यसरी कुकले संगठित रुपमा भ्रमण व्यसाव अर्थात् ‘ट्राभल बिजनेस’ को सुरुवात गरेका थिए भने घुम्न निक्लने मानिसहरुको पर्यटकीय वा विदा मनाउनेबाहेक अरु खास कुनै उद्देश्य थिएन । यसरी कुनै उद्देश्य, नाफा वा व्यक्तिगत स्वार्थ नलिई गराएको भ्रमण भएकोले उक्त भ्रमण टोलीलाई नै पहिलो ‘पर्यटकीय टोली’ मानियो । स्वदेशकै आन्तरिक पर्यटकलाई घुमाउने व्यवस्था मिलाएर कुकले ‘ट्राभल बिजनेस’ को सुरुवात गरेका थिए । सोही कारणले गर्दा उन (थोमस कुक) लाई पर्यटनको सुरुवातकर्ताका साथै पर्यटन क्षेत्रको ‘गड फादर’ अर्थात् पिता मान्ने गरिन्छ । तर, सुरुमा उनले उनले दीर्घकालीन योजनाबिना नै भ्रमण व्यवसाय सुरु गरेकाले सुरुमा उनले नाफा होइन, घाटा खाए । घाटाको व्यापार कति समयसम्म गर्न सकिन्छ ? अतः उनले यसबाट पाठ सिकेर फेरि कमिसनको आधारमा ‘ट्राभल बिजनेस’ को सुरुवात गरे । सुरुमा उनले लागत खर्चबाहेक पाँच प्रतिशत (खुद नाफा) कमिसन खान्थे । विगतको घाटाको व्यापारबाट पाठ सिकेर उनले सन् १८४५ मा फेरि कमिसन खाएर यो व्यवसाय सुरु गरेपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन ।
यसरी विश्व पर्यटनको इतिहास हेर्दा लगभग एकसय ८१ वर्षअघि बेलायत निवासी थोमस कुकले १० जना पर्यटक लिएर विश्वको विभिन्न देशमा पर्यटकीय उदेश्यले घुम्न निस्किए यता विश्वका अधिकांश देशका अरबौं–अरब मानिसहरुले विश्वका अधिकांश देशको पर्यटकीय स्थल, ऐतिहासिक स्थल, मनोरम छटाहरु तथा सांस्कृतिकस्थल आदिको भ्रमण गरिसकेका छन् ।
सन् १९९० को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनसँगै पर्यटनले पनि केही बढी महत्व पाएको मान्न सकिन्छ । त्यसपछि बनेको सरकारले आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला अर्थ व्यवस्थाको वकालत गरेको थियो । तापनि नेपालको पर्यटनका लागि सरकारी तवरबाट खासै गर्व गर्नलायक कामहरु भने भएन । हुन त तत्कालीन श्री ५ को सरकारले केही गरेन त पर्यटनका लागि ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । हो, पर्यटन क्षेत्रमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गरेको काम हामीले गर्वका साथ भन्न सक्ने र बाहिरबाटै देखिने भनेको ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड’ को गठन हो ।
समग्रमा हेर्दा विसं २०६२–०६३ को तेस्रो जनआन्दोलनको राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या लगातार बढिरहेको थियो । त्यसो भएतापनि नेपाल आउने पर्यटकले गर्ने प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन, दैनिक खर्च र प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति नेपाल बसाई अवधिमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन । जबकि विदेशी पर्यटकले नेपाल आएर गर्ने प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति दैनिक खर्च र उनीहरुको नेपाल बसाई अवधि पनि क्रमशः बढ्दै जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेर उल्टै घट्दै गएको स्थिति थियो, छ । तथापि सन् २०२० मा नेपालमा विदेशी पर्यटकले गर्ने प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति दैनिक खर्च र, उनीहरुको नेपाल बसाई अवधि पनि बढेको देखिन्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेको पर्यटन विभागले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल टुरिज्म स्टाटिस्टिक–२०२०’ नामक किताबमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०२० मा नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकको प्रति दिन, बसाई अवधि १५.१ दिन र प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन खर्च गराई ६५ अमेरिकी डलर रहेको छ । यसरी हेर्दा अब हामीले अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको र, विश्वका प्रायः सबै देश र ती देशका आम सर्वसाधारण जनहरुबीच ‘त्राही माम, त्राही माम’ को अवस्थामा रहेको कोरोनाको महामारी (कोभिड १९) ठीक अवस्थामा फर्किए पछि नेपाल भ्रमण गर्नमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउने दायित्व त छँदैछ, साथमा गुणस्तरमा अभैm सुधार ल्याउन के गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले बहस र छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।
बसाई अवधि बढाउने कुरोलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छँदैछ । कम्तिमा हामीले अब सन् २०२० मा नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकको प्रति दिन बसाई अवधि १५.१ दिन जुन छ, सो कायमै राख्नुका साथै नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकको प्रति व्यक्ति, प्रति दिन खर्च गराई ६५ अमेरिकी डलर पुगेको जुन छ सो दर, रेटलाई तत्कालै अरु बढी बढाउन नसके तापनि कायम राख्नका लागि प्रयासचाहिँ गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
त्यसो त सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार १९१ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२० मा भने जम्मा २ लाख ३० हजार ८५ जना विदेशी पर्यटकले मात्रै नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यांक रहेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६६ हजार चानचुन विदेशीहरुले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । यही आधारमा हेर्दा त सन् २०२१ को बाँकी ४ महिनामा कति पर्यटक नै नेपाल भ्रमणमा आउलान् र किटेर यसै भन्न सकिन्न । त्यही (आठ महिनाकै) दरमा आउने हो भने त यो वर्ष नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या एकलाख पनि नपुग्न सक्छ । तर, नेपाल सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि ‘अन(अराईभल भिषा’को नीति लागू गरिसकेको र ‘भ्याक्सिनेसन भई सकेका विदेशी (कोरोना विरुद्यको खोप लगाइसकेका) पर्यटकलाई थप क्वारेन्टाइनमा बस्नुनपर्ने’ नीति लिएको तथा विश्वमै कोरोना महामारीको दर पनि केही घट्दै गएकोले गर्दा राम्रै नतिजाको आशा गरौं । यस्तै, अहिले कोभिड–१९ का कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय अहिले तङ्ग्रीन थालेको छ । अहिले स्थानीय पर्यटकहरु भरिभराउ हुन थालेका छन् । कोभिड संक्रमणदर न्यून हुँदै गएपछि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको होटल व्यवसायी बताउँछन् ।